တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၂ )	13
တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၂ )
Posted by တောတွင်းပျော် on Jun 28, 2016 in Creative Writing | 13 comments
ဗျတ်ဝိသားရွာနဲ့ကျောက်ပြားတောင် အကြောင်းဆက်လိုက်အုံးမယ်။
ကျောက်ပြားတောင်က ဗျတ်ဝိသားရွာအရှေ့ ဖက် သဲချောင်းကြီးကိုကျော်ပြီး မိုင်ဝက်လောက်အကွာမှာ ရှိတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ၇၀၀ လောက်မြင့် တဲ့ တောင်ကုန်းတန်းရှည်တစ်ခုပါ။ သဲချောင်းကြီးလို့ ခေါ်ကြပေမယ့်တစ်နွေလုံးရေမပြတ်တဲ့ကျောက်ချောင်းကြီးပါ။
ကျောက်ပြားတောင်ပေါ်မှာ ကျောက်တုံးကြီးတွေ တစ်လုံးပေါ် တစ်လုံးဆင့် ပြီးတည်နေတာ
ထူးထူးခြားခြားတွေ့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကျော်ကြားတဲ့ကျိုက်ထီးရိုးကျောက်တုံးလိုမျိုး ..
ဒီမှာက နယ်မြေ ဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းမှာ ဒီလိုကျောက်တုံးကြီးတွေ သဘာဝအတိုင်း ဆင့် နေတာ
၃ ခု တွေ့ ခဲ့ တယ်။
ဒေသခံတွေ အဆိုအရ စစ်ကြီးမတိုင်ခင်က ဒီနေရာတွေမှာ ဘုရားတွေတည်ခဲ့ ကြပြီး စည်ကားခဲ့ ပုံ
ရတယ်။ စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ လည်း ပြည်တွင်းစစ် မငြိမ်မသက်တာတွေကြောင့်ဒီဒေသမှာ
ရွာတွေ မတည်နိုင်ပဲ ထားဝယ်-မြိတ် ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာနေထိုင်ခဲ့ ကြရတယ်။
အပစ်အခတ်တွေ ငြိမ်းစဲလို့သူတို့ နေရာဟောင်း ရွာဟောင်းတွေဆီပြန်ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြတာ
ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ တနယ်လုံးက ကွမ်းသီး စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။
ဒီရွာတွေဖက်သွားတဲ့ကားလမ်းက ထားဝယ် ကျောက်မီးသွေးထွက်တဲ့ နေရာသွားတဲ့လမ်းနဲ့အတူတူပါ။
ဗျတ်ဝိသားရွာအရှေ့ တောင်ဖက် ၂မိုင်လောက်မှာ ဗျတ်ဝိကြီးရွာရှိပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ပါးစပ်ရာဇဝင်အရ ရှေးရှမ်းမင်းသား ဗျတ်ဝိကြီး ဗျတ်ဝိငယ် ညီနောင်တည်ခဲ့ တဲ့ မြို့။
အခုတိုင် မြေသားမြို့ ရိုးတွေက ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ နေရတုန်း။
ဒီဒေသက ချောင်းနာမည်တစ်ချို့ ကလည်း မြို့ ဟောင်းတည်ခဲ့ တာကို သက်သေပြနေသလိုရှိပါတယ်။
ဟမ်းဘုတ်ချောင်း ( ဟင်းပုပ်ချောင်း )
ရှေးက ထမင်းသိုး ဟင်းသိုး ( ထမင်းပုပ် ဟင်းပုပ် ) စွန့် ပစ်ရာချောင်း
ချေးချောင်း … စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မစင်စွန့် နောက်ဖေးသွားရာချောင်း
ဒီဒေသက ဘုရားပြို ဘုရားပျက်က အုတ်တွေမှာ ရှမ်းစာတွေနဲ့ရေးထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတယ်။
တောတွင်းပျော်ကတော့မတွေ့ ခဲ့ ပါဘူး။
နောက်ပြီး စစ်တပ် ( အင်္ဂလိပ်လား / ဂျပန်လား မသိရ ) တပ်ချရာ ကွန်ကရစ်မီးဖိုနေရာ
စစ်တပ်မြင်းတွေ ထားရာနေရာတွေကိုလည်း ဒေသခံတွေက လိုက်ပြပေးပါတယ်။
ကျနော့် အမြင်နဲကတော့ ဒီဒေသကို ရှေးဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေ သွားရောက်လေ့ လာဖော်
ထုတ်သင့် တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကျောက်ပြားတောင်ဆိုလည်း ခုချိန်ထိ လူသူအထိအတွေ့ပြုပြင်မှုနည်းသေးတာကြောင့်အပန်းဖြေ
လေ့ လာရေးခရီးအနေနဲ့ လည်း သွားသင့် တဲ့ ဒေသတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီရွာက ဘုရားဒကာကြီးတွေကို မေးမြန်းကြည့် တာ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ သူ မဆိုစလောက်သာရှိတဲ့ အကြောင်း ဒီဒေသအကြောင်းကို ထားဝယ်က လူအတော်များများကတောင် မသိသေးတဲ့ 
သွားရောက်လည်ပတ်သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း နေထိုင်တည်းခို စားသောက်တာ အဆင်ပြေအောင်
သူတို့ က စီစဉ်ပေးတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။
ကျောက်ပြားတောင်ပေါ်မှ အမည်မသိ ဘုရား
ကျောက်ချိတ် အောက်ခြေ ၁
ကျောက်ချိတ် အောက်ခြေ ၂
Thint Aye Yeik says: အဲ့လို အရောက်အပေါက်နည်းတဲ့နေရာတွေကို သွားချင်တာ
လူရှုပ်ရှုပ်နေရာတွေထက် ဒီလို လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့နေရာတွေကို ပို စိတ်ဝင်စားနေတာ
(စာကြွင်း။ ဖွေးဖွေးနဲ့အတူ ညအိပ်ညနေ)
တောတွင်းပျော် says: ဖွေးဖွေးကပြောတယ်
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့အရပ်ဆို
ကိုကိုတောတွင်းပျော်နဲ့ ပဲ လိုက်ရဲတယ်တဲ့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုနေရာတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ လင်းစမ်းပါဦး။
တောတွင်းပျော် says: လာပင့် ကြလို့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျိုက်ထီးရိုးနဲ့ အဲသည့်တကြောက ကျောက်တုံးတွေအကြောင်း ဘူမိဗေဒအမြင်အရပြောရရင် ကျုပ်ကို ရွာပြင်ထုတ်ပြီး ဂဲနဲ့ ထုကြမယ်ထင်ရဲ့ ။ ပင်လယ်ထဲက ဆယ်လာတာမဟုတ်တဲ့ တိုးထွက်မီးသင့်ကျောက် လက်ကျန် Balancing Stone တွေ ။ အမေဂျီးကားမှာ အများကြီး ….
တိန်… ဘာတွေပြောမိမှန်းမသိ… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: သဘာဝဘူမိရဲ့ရှားရှားပါးပါး အဆန်းတကျယ်တည်နေမှုက
လူသားတွေရဲ့သဒ္ဓါနဲ့ကွန့် မြူးတတ်တဲ့အနုပညာကြောင့် 
ဖယောင်းတိုင်နဲ့အမွှေးတိုင်တွေက အလိုလိုပေါက်လာတတ်တယ် …
အနော်လည်း ဘာဒွေ ပြောမိနေပါလိမ့်Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြောက်ဆရာဂျီး…
ဂျစ်စူ says: ရှားပါး မြင်ကွင်းတွေ ဗဲထီးဂွတ် တိုင်းကျူး
တောတွင်းပျော် says: ဒီဖက်က လူအသွားအလာနည်းသေးတယ်ခင်မျ။
ဒါကြောင့်မီဒီယာတွေမှာ သိပ်မတင်ကြသေးတာ ..
kai says: ဇူလိုင်လထဲ.. မိုင် ၂၂၀၀ကျော်ခရီးကားမောင်းဖို့အကြံထုတ်ထားတယ်…။
ဓာတ်ပုံတွေတင်ဦးမလား…. လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: တင်ပါ သဂျီး ..
ဖြစ်နိုင်ရင် ရှေးဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ရိုက်တင်ပေး။
ခင်ဇော် says: ကွကိုယ်ဆို ဒီ တစ်သက်သွားမှာ ရောက်မှာ မဟုတ်လို့ မြင်ရမှာ မဟုတ်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုကိုတော
တောတွင်းပျော် says: ကိုကိုတော hmm..
ကိုကိုတောတွင်းပျော်လို့အပြည့် အစုံခေါ်မှ နားဝင်ချိုသေး ——–
ခုနောက်ပိုင်း သွားရလာရသိပ်မခက်တော့ ပါဘူး..
နယ်မြေအသစ်တစ်ခုလို စိမ်းနေသေးလို့လူတွေမရောက်ကြသေးတာပါ